Iindaba -Ibango lezithuthi zombane lomelele, imveliso yeChevrolet Bolt EV izonyuka nge-20%
Ibango lezithuthi zombane lomelele, imveliso yeChevrolet Bolt EV iyonyuka nge-20%
Nge-9 kaJulayi, i-GM izonyusa i-Chevrolet Bolt's i-20% yemveliso yombane ukuhlangabezana neemfuno zentengiso eziphezulu. UMG uthe e-United States, Canada nase-South Korea, ukuthengiswa kwe-Bolt EV kwisiqingatha sokuqala se-2018 kunyuke nge-40% xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kunyaka ophelileyo.
Umphathi we-GM u-Mary Barra uthe ngentetho ngo-Matshi ukuba imveliso ye-Bolt EV ingaqhubeka inyuka. I-Chevrolet Bolt EV iveliswa kumzi-mveliso weLake Orion eMichigan, kwaye ukuthengisa kwayo kwintengiso kunqabile. U-Mary Barra uthe kwinkomfa ebise-Houston, "Ngokusekwe kwimfuno ekhulayo ye-Chevrolet Bolt EV, sibhengeze ukuba siza kuyonyusa imveliso ye-Bolt EVs ebutsheni balo nyaka."
I-Chevrolet Bolt EV
Kwisiqingatha sokuqala sonyaka, iBolt EV ithengise iiyunithi ezingama-7,858 e-United States (iGM ibhengeze ukuthengisa kwikota yokuqala neyesibini), kwaye ukuthengiswa kweemoto kunyuke nge-3.5% ukusuka kwisiqingatha sokuqala sika-2017. Kufuneka kuqatshelwe ukuba iBolt's Olona khuphiswano luphambili ngeli nqanaba yiNissan Leaf. Ngokwengxelo yeNissan, umthamo wentengiso yesithuthi sombane seLeAF eMelika ibingama-6, 659.
U-Kurt McNeil, usekela-mongameli we-GM kwishishini lokuthengisa, uthe kwingxelo, "Iziphumo ezongezelelekileyo zanele ukufumana ukukhula kweentengiso zeBolt EV. Ukwandisa uluhlu lwayo kwimarike yase-US kuya kwenza umbono wethu wokungabikho kwezinto ezingcolileyo kwihlabathi lisondele ngakumbi. ”
Ukongeza kwintengiso ethe ngqo kunye nerente kubathengi, i-Chevrolet Bolt EV ikwaguqulwe yaba yi-Cruise Automation autopilot. Kufuneka iqatshelwe ukuba i-GM ifumene i-Cruise Automation ngo-2016.